I-modely - Geofumadas
Ny zavatra rehetra manodidina antsika dia mandeha nomerika. Ny teknolojia mandroso toy ny intelligence intelijialy sy ny Internet of Things (IoT) dia manjary lasa ampahany lehibe amin'ny indostria tsirairay, manao ny dingana haingana sy mahomby kokoa amin'ny resaka vola, fotoana ary ny fanarahana. Mandehana nomerika ...
Ireo tompon-kevitra farany amin'ny loka "Infrastructure"
Bentley Systems dia nanambara ny tetikasan'ny finalist ho an'ny fanomezana ny fanavaozana tsara indrindra amin'ny fampiasana ny vahaolana rindrambaiko amin'ny fitantanana fotodrafitrasa. Miisa 57 ny finaliste, avy amin'ny fanendrena 420 manerantany ho an'ity hetsika 2018. Mangatsiaka ny isa nefa hita taratra izany ny antony tany Singapore, foibe ...
Asio sarintany Bing toy ny sarintany misy ao amin'ny Microstation
Microstation ao amin'ny Edition CONNECT, ao amin'ny fanavaozana 7 dia nanetsika ny fahafaha-mampiasa Bing Map ho toy ny sosona serivisy sary. Na dia azo atao aza izany teo aloha dia naka lakile fanavaozana Microsoft Bing izy; saingy araka ny tadidinao, Microsoft dia mpiara-miasa voalohany amin'i Bentley ao amin'ny Alliance Pavilion…
Fanamarinana Cadastral automatique avy amin'ny CAD / GIS
Ny famoahana mari-pahaizana momba ny fananana amin'ny fotoana mety indrindra dia tena ilaina amin'ny fanomezana asa fanompoana any amin'ny faritra Cadastre, azo alaina mekanika tsy misy fiezahana be io, miantoka ny fahombiazana sy ny fihenan'ny lesoka ataon'ny olombelona. Amin'ny lamaody taloha, rehefa niara-niasa tamin'ny tanàna izahay, rehefa nangataka fanadihadiana sy mari-pahaizana momba ny cadastral ny mpampiasa iray, ny antsasaky ny asa dia ...
Bentley Systems cadastre I-modely QGIS
Indray alina eo amin'ny mari-pankasitrahana ny ho Ara-tsindrimandry
Fitaovana mahafinaritra i Blogsy, hatreto no tsara indrindra amin'ny fanoratana amin'ny iPad. Ho fampisehoana dia mikasa ny hanavao ity lahatsoratra ity aho tahaka ny fanomezana ny loka. Te-hanaraka ireo mpitsidika miaina miaraka amin'i Woopra aho, saingy mavesatra loatra ny soratanany ka nanipy ahy ny tranokala indroa, ...
Bentley I-modely, fifandraisana amin'ny ODBC
I-modely dia ny tolo-kevitr'i Bentley hampalaza ny fampisehoana ireo rakitra amin'ny alàlan'ny fahafaha-mamakafaka, manadihady ary manasongadina ny xml natsofoka. Na dia misy plugins aza hifaneraserana amin'ny AutoDesk Revit sy iPad, angamba ny fiasa namboarina ho an'ny mpamaky pdf sy ny mpikaroka Windows 7 no tena hita ao ...